♪ “Samsung Galaxy Note 7” ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
♪ “Samsung Galaxy Note 7” ♫
Tuesday, August 23, 2016 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Samsung Galaxy Note7ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ရောင်းချ ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်ခံ့မာကျော တဲ့ မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Blue Coral, Cold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx ဆိုတဲ့ အ ရောင်(၄)မျိုးကို ထုတ်လုပ် ပေးထားပါတယ်။
GSM, HSPA နဲ့ LTE Networks တွေမှာ အဆင်ပြေပြေ သုံးစွဲနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Double SIM ဆိုတဲ့ Version နှစ်မျိုးကို ခွဲခြား ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ထည့်သွင်းအသုံးပြု ရမယ့် SIM Card အမျိုး အစားကတော့ Nano SIM ပါ။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 153.5×73.9×7.9 mm ရှိပြီး 169 အလေးချိန် လေးပါတယ်။ Super AMOLED Capacitive Touchscreen Display က အကျယ် ၅.၇ လက်မရှိပြီး 1440×2560 pixels ပမာဏရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
၁ လက်မအတိုင်းအတာ မှာဆိုရင် 518 ppi pixels ပမာဏသိပ်သည်းဆကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင်ကို အကြမ်းခံနိုင်အောင် Corning Gorilla Glass5နဲ့ ဖုံးအုပ် ကာကွယ်ပေးထားပြီး IP68 လက်မှတ် ရရှိထားတာကြောင့် ဖုန်ဒဏ်တွေကို ခံနိုင်တဲ့အပြင် ရေအောက် ၁ မီတာခွဲအနက်အထိကို မိနစ်(၃၀)ကြာမျှ ယူဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ Multitouch စနစ်ကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အနောက်ကင်မရာက 12 MP အရည်အသွေးရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ 30 fps မှာ 2160p, 60 fps မှာ 1080p, 240 fps မှာ 720p အသီးသီးရှိတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့ ကင်မရာကတော့ 5MP သာပါရှိပါတယ်။ ယာယီ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားပိုင်းအနေနဲ့ RAM 4GB ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Non-removable Li-Po 3500 mAh Battery ကိုပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
CPU - OC (4×2.3 GHz Mongoose &
4×1.6 GHz Cortex-A53)
Memory - 64 GB (up to 256 GB)
OS - Android OS, v6.0.1
Xiaomi Phone များ Models ခွဲခြားနည်း
♪ Digital Life Journal Issue Vol-5 ၊ Issue 18 (29....
လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို အတတ်ပညာတွေသာ Upload လုပ...
Mobile Guide ( Vol-3, No-67 )
တိုက်ကွမ်ဒို ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး - Taekwondo Ga...
ဖုန်းမှာတင် Video edit တွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - KineMa...
Selfie ကင်မရာဆော့ဝဲကောင်းလေး - CR7Selfie v1.0.1 Ap...
Xiaomi Mi Max ကို Root ပြုလုပ်နည်း
Samsung Galaxy A9 Pro (SM-A910F) ကို Root ပြုလုပ်န...
Window Activate မဖြစ်သေးသူများအတွက် Re-Loader Acti...
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်က...
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးအပါအဝင် ၈ ဦးကို ရာထူးတ...
ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် လူ ၃၁ ဦး မိုးကြိုးစက်ကွင်းထိမ...
Samsung Galaxy E7 (SM-E700F & E700H) Root ပြုလုပ်န...
နိုကီယာနှင့် အူရီဒူးတို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတ...
Xiaomi Devices တွေအတွက် All In One Tool (Flash TWR...
♪ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်တရားတော်များ application ♫
♪ အိပ်ရာoင်ပုံပြင်များ application ♫
♪ PlayStation ဂိမ်းတွေကို အင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနဲ့ ...
♪ ပုံရိပ်တွေကို Offline အနေနဲ့ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီ ဖြစ...
MI Devices တွေအတွက် Xiaomi TWRP Flasher Tool (PC)
ငလျင်ဒဏ်သင့် ပုဂံဘုရားပြု ပြင်ရေး UNESCO ကူညီမည်
နာက်ဆက်တွဲငလျင်များ သတိထားဖို့ ဦးထွန်းလွင် သတိပေ...
အီတလီ ငလျင် ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၄၇ ဦးရှိ၊ အသက်ရှင်သ...
♪ Sony ရဲ့ Xperia Z5 အပါအဝင် Sony ဖုန်းအများစုမှာ ...
Pokémon Go မှာ လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု သိသိသာသာလျော့နည...
Virus တွေကြောက်ကြောက်နေသူများအတွက် Virus ကာကွယ်မယ့...